Ethanol: Angovo fandrehitra sy fandrahoan-tsakafo omena ny isan-tokantrano
vendredi, 11 mai 2018 12:35
Tahirin-tsary Ranomafana Brickaville
Ny ankabeazan'ny Malagasy amin'izao dia mbola mampiasa saribao, na kitay avokoa andrahoan-tsakafo. Mahalany saribao gony lehibe iray isan-kerinandro ny tokantrano misy olona 5 amin'ny ankapobehany, izany hoe 80 000 ariary (400 000fmg) isam-bolana raha 20 000 ariary ny goni-tsaribao lehibe iray.
Ny Malagasy anefa dia mahay manao toaka gasy, izay tsy inona fa alcool mihoatra ny 90°, izay mirehitra, tsy inona ny toaka gasy fa éthanol ihany, saingy ny éthanol dia tsy asiana larony, na ilay mahatsara tsiro.
Tsy famporisihina ny olona isotro toaka izany ity programa lehibe ity, satria dia ho arahi-maso ny famokarana azy, ka hisy ny fandokoana ny éthanol ampiavaka azy amin'ny lokon'ny lasantsy sy pétrole ary ny gazoala. Asiana fangaro ihany koa ny éthanol mba tsy ahafahana misotro azy (Colorant et amérisant).
Ny éthanol dia azo avy amin'ny fary na mangahazo.
Ny fary sy mangahazo dia maniry manerana ny nosy.
Ny éthanol 1 litatra dia mahavita andrahoan-tsakafo mandritra ny 4ora, tsy mipoaka, fa mila fitandremana fotsiny satria mirehitra.
Tetikasa Vitatsika io:
Anisan'ny tetikasa lehibe izy ity hirosoana amin'ny fampiasana angovo madio sy ho fiarovana ny tontolo iainana.
- Hanao fambolena fary sy mangahazo midadasika, izay ampiasana milina vaventy, ampiasana ny manapahaizana Malagasy, ireo Service National, ireo mpianatry ny Agro sy Lycée technique et professionnel.
- Hanao ozinina lehibe amokarana siramamy, satria ny fary dia hizara roa, ny alcool azo avy aminy, izay lasa éthanol, ary ny siramamy.
Marihina fa ny faika-pary io ihany no entina atao afo fandrehitra mandritra ny famokarana ny éthanol sy ny siramamy.
Velarantany 1ha dia mamokatra fary 80 tonnes, izay ahazoana siramamy 8 tonnes ary éthanol 1300 litres.
- Omena fatana éthanol, mahazaka vilany roa isan-tokantrano ny Malagasy 4 tapitrisa manerana ny nosy. Ilay carte électronique izay ampiasaina ho solon'ny vola kosa no vatsiana éthanol 30 litres isam-bolana, isan-tokantrano.
Mahatratra 30x12= 360 litres isan-taona, isan-tokatrano izany no éthanol omena ny fianakaviana iray. Ka 1 440 000 000 litres izany no ilaina vokarina ho an'ny Malagasy rehetra.
Tany 2 millions ha no ho volena fary, izany hoe 3,5% n'ny velarantany eto Madagasikara. Mitovy amin'ny fambolena vary efa misy ankehitriny.
Azahoantsika 6 millions tonnes siramamy io, ary 2,6 milliards litres éthanol, izay ampy tsara amatsiana ny Malagasy rehetra.
Teti-bola sy ny famatsiam-bola.
Hisy Indostria 3 lehibe no atsangana, 1 isaky ny faritra, avaratra, afovoany, atsimo. Hamokatra siramamy, sy éthanol.
Hisy orinasa na koeparativa 1 000 madinika na salatsalany, Malagasy, kosa no ho vatsiana vola hanao ny asa fambolena fary na mangahazo, ho famokarana siramamy sy éthanol, ka omena tany 2 000 ha isanisany, ahafahana mamboly ilay 2 millions ha.
Vatsiana fitaovana vaventy izy ireo amin'izany, vatsiana ny fampidiran-drano sy ny fomba famokarana. Ireo tanora efa miasa ao anatin'izany sehatra izany sy ireo tanora Malagasy nivoaka tamin'ireny Université na sekoly ambony momba ny fambolena, ary ireo tanora, na tsy manana diploma ambony, nefa te handraharaha amin'izany no hofanina. Ireo mpanao toaka gasy efa zadraharaha amin'ny famokarana izany, tsy misy enjehina izany izy ireo, fa ampiasaina ny fahaizany.
Vola 15 milliards de dollars eo no atokana amin'ny fambolena ny fary amin'ny 2 millions ha, ananganana ny Ozinina 3, amokarana fary 6 millions tonnes, ary amokarana éthanol 2,6 milliards litres.
Ny Bourse de Londres izao dia mividy ny siramamy 323$ US ny tonne. Izany hoe ampiditra 2 milliards de dollars isan-taona amintsika izany ny siramamy, ka ao anatin'ny 10 taona dia hiverina ny famatsiam-bola.
Ireo mpandraharaha rehetra amin'ity fanaovana saribao ity izany dia hofanina handraharaha amin'ny éthanol, na ny fambolena ny fary, ny famokarana éthanol, ny fitaterana azy, ary ny station service fitsinjarana sy famarotana azy.
Mandeha eo amin'ny station ianao izany, mitondra ny carte électronique nao, toy ny mividy crédit ireny ihany, azonao zaraina amin'olon-kafa, na akanao ny anjaranao, rehefa lany ny crédit éthanol nao dia mividy amin'ny volanao ao anaty carte électronique nao ianao.
Ezaka iray lehibe izany ny fametrahana ireny mpaninjara ireny any ambanivodhitra lavitra rehetra any, ka amporisihina ireo mpandraharaha satria dia asa mahavelona izany izy ity.
Ny fambolena ala, izay programa efa nazavaitsika ihany koa, dia ahazoantsika mivarotra ny antsoina hoe crédit carbone eo amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Ireo Firenena mandoto ny tontolo iainana dia mandoa vola, ka mividy ny crédit carbone amin'ireo Firenena mikoja sy mamboly hazo.
Ka hidiram-bola betsaka ihany koa izany isika amin'ity programa ity satria ahazo vola avy amin'io crédit carbone, amidy amin'ny tsena iraisam-pirenena io.
Toy ny fanaontsika, dia ilay sehatra iray arovana, na mandoto, no mandoa ny vola hiarovana azy, na anadiovana azy.
Ka eto dia ny tontolo iainana no arovana, ny ala no arovana, ny angovo no havaozina ho any amin'ny fampiasana angovo madio, ka ny vidin'ireo ala saro-bidy izay jerena ny fitrandrahana azy ho ara-dalàna, na bois de rose, na palissandre na bois d'ébène, ny vidin'ny gaz vokatra eto amintsika toa ny any Sakaraha, ny vola azo avy amin'ny bloc pétrolier izay trandrahana eto amintsika, toy ny any amin'ny faritra andrefana rehetra, na an-tanety na an-dranomasina no amatsy ity tetikasa goavana ity.
Ny tetikasa kosa dia natao ahavelon-tena sy hamerim-bola ahafahantsika mamatsy tetikasa hafa indray.
Aharitra 3 taona ny fanatontosana ity tetik'asa ity, ny taona 2 voalohany, ny fanajariana ny tany sy ny fametrahana fotodrafitrasa vaventy rehetra, toy ny barazy sy ny lakan-drano ary pipeline, izay sady amatsy rano ny fambolena fary sy mangahazo, no amatsy ihany koa ny fambolem-bary sy voly hafa ary ny fiompiana, ary indrindra ny rano fisotro.
Ao anatin'izay roa taona voalohany izay ihany koa no hanofanana ireo tanora Malagasy hiantsehatra amin'ity éthanol ity. Fananganana ny Ozinina lehibe hamokatra éthanol, fametrahana ireo toby mpaninjara manerana ny nosy, ka ireo Malagasy te hitazona station de service éthanol dia vatsiana fitaovana sy fampihofanana avokoa. Fametrahana indostria famokarana ny fatana éthanol Vita Malagasy.
Ny taona fahatelo, famokarana ny éthanol, fitsinjarana izany isan-tokantrano.
Ny tombom-barotra azotsika amin'io siramamy io izany no averina any amintsika amin'ny alalan'ny fanomezana ny éthanol ao anatin'ilay carte électronique tsika.
Hihena izany ny fandaniana ao an-tokantranotsika, satria dia ahazo vary 150Kg isam-bolana, 30 litres éthanol isam-bolana, ary 15m3 rano fisotro isan-tokatrano. Hitentina 500 000 ariary eo izany isan-tokantrano, ankoatran'ny karama izay raisintsika amin'ny asantsika tsirairay.
Ho voafehy ny fidangan'ny vidim-piainana ary tsy misy Malagasy ho noana na haloto tsy hisasa na hisotro rano maloto izany.
Ho voakajy ny tontolo iainana, ho fehezina ny fanaovana saribao, ka ny fambolena hazo natokana ho trandrahana anaovana planche sy saribao ihany sisa no ekena fa ho voarara kosa ny sisa hafa.
Ho lasa Tany Maitso ity Nositsika ity.
(Tahirin-tsary Ranomafana Brickaville)